Gudoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta xafiiska ku qaabilay Wafdi ka socday QM oo uu hogaaminayey ergeygii hore ee arimaha Soomaaliya u qaabilsanaa QM Danjire Augustine Mahiga.
Kulanka oo ka dhacay Xafiiska Gudoonka Baarlamaanka ayaa waxa ay ka wada hadleen Gudoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo Danjire Augustine Mahiga ayaa waxaa ka mid ah isbedellada hormarineed ee ka jira gudaha dalka iyo guullaha isdaba jooga ah ee ay gaartay Dowladda Federaalka Soomaaliya oo isugu jira hormarinta xiriirka caalamka iyo arimmo kale sida isbedellada amni ee iyagu horseeday in magaalada Muqdisho laga furo xafiisyada hay’adaha Caalamka iyo Safaarradaha.
Danjire Augustine Mahiga oo isna dhankiisa saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in Gudoomiyaha Baarlamaanka Mudane Jawaari ay isla soo shaqeeyeen marxaladihii adkaa ee Soomaaliya looga saarayey KMGkii waxaana uu ku ammaanay sidii hufnaanta laheyd ee uu ulasoo shaqeeyey mudadaasi adkeyd ee looga soo gudbayey KMGka.
Kulanka uu la qaatay Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ergeygii hore ee QM u qaabilsanaa arimaha Soomaaliya Danjire Augustine Mahiga ayaa kusoo gebageboobay jawi wanaagsan waxaana ay aheyd bishii hore markii xafiiska siyaasadda QM ee Soomaaliya UNPOS laga bedelay Danjire Mahiga oo lagu bedelay Nicholas Kay oo u dhashay dalka Britain.
Xafiiska Warfaafinta Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya